Dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay dalalka Canada iyo Mareykanka | Xaysimo
Home War Dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay dalalka Canada iyo Mareykanka
Yaa dila dhalinyarada? Maxaase loo dilaa? Waa su’aalaha aan wali la helin jawaabtooda, balse Isnina Cali oo ka mid ah hoyooyiinka Soomaalida ee ku nool Canada ayaa BBC-da u sheegtay in dowladda ay ka gaabisay wax ka qabashada arrintan.
“Markaan sheegno oo aan dowladda la wadaagno sida ay wax u dhaceen, wax naga hoos qaado malahan, waxay ila tahay in dhanka Dowladda aanay wax caddaalad ah ka jirin, sababtoo ah dowladda waxay ka koobaan tahay dhowr hay’adood, Soomaalidana kama muuqaato hey’adaas oo ay ka mid tahay maxkamadaha ama caddaaladda, qeybta booliska iyo baaritanaada Soomaalida kama dhex muqato, sidaas awgeed ayaan u maleynaya in ilmaheenna aysan cadaalad u helin”, ayay tiri Isniina Cali.
Balse, Liiban Gabeyre oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, kuna nool dalka Canada ayaa sheegay in wax ka qabashada arrintan ay tahay mas’uuliyad wadareed oo cid gaar ah aanan lagu eedeyn karin.
“Ma jirto cid si gooni ah farta loogu fiiqo, waana ayaan darro. Dilalka noocan ah ee Soomaalida badankooda (dadka ka dambeeya) lama soo qabto.”